विश्वलाई लिएर चिनको बरिष्ठ वैज्ञानिकले गरे यस्तो राम्रो भविष्यवाणी,सबै खुसि
काठमाँडौ – चीनका सबैभन्दा बरिष्ठ को’रो’ना भा’इरस विशेषज्ञले आगामी ४ हप्तामा पूरै विश्वको अवस्था बदलिने भविष्यवाणी गरेका छन् । उनले आगामी ४ हप्तामा पूरै विश्वको अवस्था पहिलेजस्तै सामान्य अवस्थामा फर्कन सुरु हुने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार यो अवधिपछि को’रो’ना भा’इर’सका नयाँ संक्र’मणका केसमा क’मी आउनेछ । उनले चीनमा अब को’रो’ना भा’इरसको दोस्रो आक्रमण नहुने समेत भविष्यवाणी गरेका छन् ।
को’रो’ना भा’इरस संक्र’मण नियन्त्रण र उपचारका लागि चीन सरकारले गठन गरेको मुख्य टिमका प्रमुख डा. झांग नेनशेनले यस्तो भविष्यवाणी गरेका हुन् । ८३ वर्षीय झांगले भने ‘चीनमा को’रो’ना भा’इर’सको दोस्रो आ’क्र’मण हुने छैन किनकि हामीले मनिटरिङ सिस्टमलाई अत्यन्तै बलियो बनाएका छौं ।’
डा.नेनशेनले शेनझेनको एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा यस्तो बताएको डेलिमेलले उल्लेख गरेको छ । डा. नेनशेनले भने ‘को’रो’ना भा’इ’रससँग लड्ने २ मात्र तरिका छन् ।
पहिलो हामीले संक्र’मणको दरलाई सबैभन्दा कम स्टरमा जैजाउँ र त्यसलाई बढ्नबाट रोकौं । यसबाट हामीलाई भ्याक्सिन बनाउन समय प्राप्त हुनेछ र हामीले यो रोगलाई समाप्त गर्न सक्नेछौं ।
दोस्रो तरिका यो हो कि संक्रमणमा ढिलाइ ल्याउँ र आफ्ना केही बिरामीको संख्यालाई अलग अलग तरिकाले कम गरौं । धेरैजसो देशले को’रो’ना भा’इरसको संक्रमणलाई लिएर क’डा कदम उठाएका छन् ।
यस्तोमा मलाई आशा छ कि आगामी ४ हप्तामा नयाँ सं’क्रमित भे’टिन लगभग बन्द हुनेछ ।’डा। झांगले अहिले पनि चीनमा लाखौं साइलेन्ट को’रोना क्यारियर भएको हल्ला फैलाइएको भन्दै यो झुटो भएको बताए ।
उनले भने ‘हामीले ती सबै बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गरिसकेका छौं जसमा भाइ’रसको सं’क्रमण छ तर लक्षण देखिएको छैन । यस्ता बि’रामीलाई एसिम्टोम्याटिक केस भनिन्छ । एसिम्टोम्याटिक केसबाट सं’क्रमण बढ्ने ख’तरा चीनमा धेरै छैन । किनकि अहिलेसम्म हामीले यसको प्रमाण भेटेका छैनौं ।’एसेन्जी
२०७८ असार २१, सोमबार ००:४८0Minutes 145 Views